စက်တင်ဘာ ၉ ရက်နေ့တုန်းက အိန္ဒိယနဲ့ တရုတ်နယ်စပ်တွင် အိန္ဒိယ တပ်ဖွဲ့မှ ကင်းလှည့်နေစဉ်
စစ်မျက်နှာ နှစ်ဖက်ဖွင့် တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက် အိန္ဒိယ လေတပ်ကို အသင့်ပြင်ဆင်ထားကြောင်း အိန္ဒိယလေတပ် အကြီးအကဲက တနင်္လာနေ့က ပြောပါတယ်။
"စစ်မျက်နှာ နှစ်ဖက်ဖွင့် တိုက်ပွဲအပါအဝင် ဘယ်သမားရိုးကျစစ်ပွဲကို မဆို ဆင်နွှဲဖို့ အိန္ဒိယ လေတပ်အနေနဲ့ အဆင်သင့်ရှိနေကြောင်း၊ လက်တလော ခြိမ်းခြောက်မှုနဲ့ အန္တရာယ် ရှိနေတဲ့အနေအထားကို တုန့်ပြန်ဖို့ အိန္ဒိယလေတပ်ကို တိုက်ခိုက်ရေးစွမ်းရည် အဆင့်နဲ့ အသင့် ရှိနေရေး အမြဲတမ်း အလေးထား လုပ်ဆောင်နေကြောင်း" အိန္ဒိယ လေတပ် စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး R.K.S. Bhadauria က ပြောသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
နျူးကလီယား လက်နက် ပိုင်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေ ဖြစ်တဲ့ အိန္ဒိယနဲ့ တရုတ်တို့အကြား နယ်စပ်အငြင်းပွားမှုကြောင့် ဆယ်စုနှစ်တွေထဲ ထိပ်တိုက် ရင်ဆိုင်မှု အဆိုးဆုံး အခြေအနေကို ရောက်ရှိနေချိန်မှာ အိန္ဒိယ လေတပ် စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Bhadauria က အခုလို ပြောလိုက်တာပါ။
ဇွန်လတုန်းက အိန္ဒိယနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံအကြား နယ်စပ်ဒေသမှာ အချင်းများမှုတွေ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက် တင်းမာမှုတွေ မြင့်တက်ခဲ့ တာပါ။ နှစ်ဖက်တပ်ဖွဲ့တွေ အကြား ခိုက်ရန် ဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့် အိန္ဒိယ တပ်သား ၂၀ ကျော် သေဆုံးခဲ့ရသလို တရုတ်တို့ဘက်မှာ လည်း အရေအတွက် မသိရတဲ့ သေဆုံး ဒဏ်ရာရမိတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ လကတော့ ရုရှားနိုင်ငံ၊ မော်စကိုမြို့မှာ နှစ်ဘက် အဆင့်မြင့် သံတမန်တွေ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့အပြီး တင်းမာမှုတွေ လျှော့ချ ဖို့နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ တည်ငြိမ်ရေးကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့ သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။
နှစ်နိုင်ငံ တပ်တွေ ထိတွေ့မှု မရှိအောင် နေရာချထားဖို့နဲ့ တင်းမာမှု လျှော့ချဖို့ကိုလည်း သဘောတူညီခဲ့ကြတာပါ။
ပြီးခဲ့တဲ့လကတော့ အိန္ဒိယနိုင်ငံက ပြင်သစ်လုပ် Rafale တိုက်လေယာဉ်တွေ လက်ခံရရှိခဲ့သလို နောက်ထပ် ၃၁ စင်းကိုလည်း မကြာ ခင် လက်ခံရရှိဖို့ ရှိနေပါတယ်။ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၈.၇ ဘီလီယံ တန်ဖိုးရှိတဲ့ တိုက် လေယာဉ် ဝယ်ယူရေး သဘောတူ စာချုပ်ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်တုန်းက အိန္ဒိယ ဝန်ကြီးချုပ် Narendra Modi နဲ့ အဲဒီ အချိန်က ပြင်သစ် သမ္မတ François Hollande တို့အကြား လက်မှတ်ရေး ထိုးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
တရုတျနဲ့ စဈမကျြနှာ နှဈဖကျဖှငျ့တိုကျပှဲ အိန်ဒိယ အသငျ့ပွငျထား
စဈမကျြနှာ နှဈဖကျဖှငျ့ တိုကျခိုကျဖို့အတှကျ အိန်ဒိယ လတေပျကို အသငျ့ပွငျဆငျထားကွောငျး အိန်ဒိယလတေပျ အကွီးအကဲက တနင်ျလာနကေ့ ပွောပါတယျ။
"စဈမကျြနှာ နှဈဖကျဖှငျ့ တိုကျပှဲအပါအဝငျ ဘယျသမားရိုးကစြဈပှဲကို မဆို ဆငျနှဲဖို့ အိန်ဒိယ လတေပျအနနေဲ့ အဆငျသငျ့ရှိနကွေောငျး၊ လကျတလော ခွိမျးခွောကျမှုနဲ့ အန်တရာယျ ရှိနတေဲ့အနအေထားကို တုနျ့ပွနျဖို့ အိန်ဒိယလတေပျကို တိုကျခိုကျရေးစှမျးရညျ အဆငျ့နဲ့ အသငျ့ ရှိနရေေး အမွဲတမျး အလေးထား လုပျဆောငျနကွေောငျး" အိန်ဒိယ လတေပျ စဈဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျကွီး R.K.S. Bhadauria က ပွောသှားတာ ဖွဈပါတယျ။
နြူးကလီယား လကျနကျ ပိုငျဆိုငျတဲ့နိုငျငံတှေ ဖွဈတဲ့ အိန်ဒိယနဲ့ တရုတျတို့အကွား နယျစပျအငွငျးပှားမှုကွောငျ့ ဆယျစုနှဈတှထေဲ ထိပျတိုကျ ရငျဆိုငျမှု အဆိုးဆုံး အခွအေနကေို ရောကျရှိနခြေိနျမှာ အိန်ဒိယ လတေပျ စဈဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျကွီး Bhadauria က အခုလို ပွောလိုကျတာပါ။
ဇှနျလတုနျးက အိန်ဒိယနဲ့ တရုတျနိုငျငံအကွား နယျစပျဒသေမှာ အခငျြးမြားမှုတှေ ဖွဈပှားခဲ့ပွီးတဲ့နောကျ တငျးမာမှုတှေ မွငျ့တကျခဲ့ တာပါ။ နှဈဖကျတပျဖှဲ့တှေ အကွား ခိုကျရနျ ဖွဈပှားခဲ့တာကွောငျ့ အိန်ဒိယ တပျသား ၂၀ ကြျော သဆေုံးခဲ့ရသလို တရုတျတို့ဘကျမှာ လညျး အရအေတှကျ မသိရတဲ့ သဆေုံး ဒဏျရာရမိတှေ ရှိခဲ့ပါတယျ။
ပွီးခဲ့တဲ့ လကတော့ ရုရှားနိုငျငံ၊ မျောစကိုမွို့မှာ နှဈဘကျ အဆငျ့မွငျ့ သံတမနျတှေ တှဆေုံ့ဆှေးနှေးခဲ့အပွီး တငျးမာမှုတှေ လြှော့ခြ ဖို့နဲ့ ငွိမျးခမျြးရေးနဲ့ တညျငွိမျရေးကို ပွနျလညျတညျဆောကျဖို့ သဘောတူခဲ့ကွပါတယျ။
နှဈနိုငျငံ တပျတှေ ထိတှမှေု့ မရှိအောငျ နရောခထြားဖို့နဲ့ တငျးမာမှု လြှော့ခဖြို့ကိုလညျး သဘောတူညီခဲ့ကွတာပါ။
ပွီးခဲ့တဲ့လကတော့ အိန်ဒိယနိုငျငံက ပွငျသဈလုပျ Rafale တိုကျလယောဉျတှေ လကျခံရရှိခဲ့သလို နောကျထပျ ၃၁ စငျးကိုလညျး မကွာ ခငျ လကျခံရရှိဖို့ ရှိနပေါတယျ။ အမရေိကနျ ဒျေါလာ ၈.၇ ဘီလီယံ တနျဖိုးရှိတဲ့ တိုကျ လယောဉျ ဝယျယူရေး သဘောတူ စာခြုပျကို ၂၀၁၆ ခုနှဈတုနျးက အိန်ဒိယ ဝနျကွီးခြုပျ Narendra Modi နဲ့ အဲဒီ အခြိနျက ပွငျသဈ သမ်မတ François Hollande တို့အကွား လကျမှတျရေး ထိုးခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။